Toamasina : Aparitaka amin’ny “tuc – tuc” sy “bajaj” ny vola sandoka
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → août → 8 → Toamasina : Aparitaka amin’ny “tuc – tuc” sy “bajaj” ny vola sandoka
Mitaraina ireo mpitondra “tuc – tuc” sy “bajaj” eto Toamasina izao, fa misy ireo manome vola sandoka azy ireo amin’ny saran-dalana ka mizaka ny vokatr’izany izy ireo eo am-panaovana ny fandoavam-bola amin’ny tompon’ny “tuc – tuc” sy “bajaj”, satria voatery manolo ireo vola sandoka azony.
Raha ny fanazavan’ny iray tamin’izy ireo, dia ny vola: 2.000 ariary, 5.000 ariary ary 10.000 ariary no tena ahitana ity vola sandoka azon’izy ireo ity. Tsy hain’izy ireo hoe iza tamin’ireo mpanjifany no mpanome izany, satria eo am-pandoavam-bola hatrany vao hita ireo vola sandoka ireo; izay mahatratra 100.000 ariary ny fitambarany amin’ireo mpitondra “tuc – tuc” sy “bajaj” rehefa tonga eny amin’ny “patron”-n’izy ireo. Tato ho ato vokatr’ izany, dia nanomboka mailo amin’ireo mpanjifany ireo mpitondra “tuc – tuc” sy “bajaj” ireto; ka misy hatrany ny fisavan’izy ireo ny vola raha vao ireo vola ahitana sandoka ireo, 2.000 – 5.000 – 10.000 ariary no omen’ireo mpanjifany azy ireo, ho saran-dalana.
Tsy mbola nisy anefa ny fitoriana na ny fitarainan’ireto mpitondra na tompon’ireo “tuc – tuc” sy “bajaj” eto Toamasina ireto tamin’ny mpitandro ny filaminana misahana ny resaka ara-toekarena, sy ny polisy misahana ny heloka be vava, na eo aza ny fahazoan’izy ireo matetika izany vola sandoka izany. Tsy mbola nisy ihany koa anefa ireo sehatra ara-barotra hafa nitaraina mikasika izany hatreto…